Akhriso: Kiiska Badda iyo Dadkii Ku Lug lahaa 7-badii sano ee lasoo dhaafay - Bulsho News
Guddiga Doorashooyinka Puntland oo ganaaxay Urur Siyaasadeedka Kaah
Kiiskii Badda oo Soomaaliya Ku Guuleysatay Balse Qeyb Baddii ka...
Akhriso: Kiiska Badda iyo Dadkii Ku Lug lahaa 7-badii sano ee lasoo dhaafay
Kiiska badda ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya oo maanta lagu soo gabagabeynayo Hague ayaa waxaa ku lug lahaa 7-badii sano ee lasoo dhaafay dad kala duwan.
Hadaba halkan ka akhriso: Dadkii sida tooska ah ugu lugta lahaa
Madaxweyne Xasan Sheekh oo dacwada maxkamadda ICJ geeyey, kiiskana dhaqaajiyey iyo madaxweyne Farmaajo oo muddadiisa sii waday. Labada waxaa saarnaa mas’uuliyad siyaasi ah, waana kasoo baxeen!
Wakiillada Soomaaliya ee Kiiska ku Saxiixnaa markii hore waa: Muna Al-sharmaani, oo aheyd lataliyaha madaxweyne Xasan Sheekh, Axmed Cali Daahir oo ahaa xeer ilaaliyihii hore ee qaranka iyo Cali Saciid Fiqi oo ahaa safiirkii Soomaaliya ee midowga Yurub, Farmaajo ayaa gadaal uga daray Axmed Ciise Cawad wasiirkiisa arrimaha dibadda iyo ra’isul wasaare ku xigeenka Mahdi Maxamed Guuleed.
Waxaa kale oo isna kaalin muhiim ah ku lahaa Allaha u naxariistee Eng. Max’ed Cumar Saalixi, oo la taliye u ahaa Xasan Sheekh iyo Farmaajo, ku tashasusay cilmiga badaha, ahaana ninka keliya ee Soomaali ah ee hayey file-ka 11-kii sano ee lasoo dhaafay.
Qareennada Kiiska u Matalayey Soomaaliya ee kala ahaa:
1. Paul Riichler: Waa abuukaate caalami ah, oo fadhigiisu yahay Washington, D.C, kana soo baxay Harvard Law School, J.D., cum laude 1973 iyo Jaamacadda Tufts, B.A. 1969, waxaa uu ku hadlaa Spanish iyo English.
2. Prof. Philippe Sands:Waa 58 jir fadhigiisu yahay London, waxaa uu wax ka bartay Harvard Law Schooliyo Corpus Christi College, sidoo kale waxaa uu wax ka dhigaa University College London iyo jaamacado kale oo Mareykanka, Canada, Faransiiska iyo Australia ah.
3. Prof. Alain Pellet:Waa 72 jir, waa Abuukaate Faransiis ah, waxaa wax ka dhigaa Université de Paris Ouest – Nanterre La Défense, waxaa uu in badan lataliye u ahaa dowladda Faransiiska, waxaa uu wax ku bartay isla Paris.
Luis Suarez Oo Kashifay Qaabkii Uu Ronald Koeman...
Maxaa kasoo baxay wada-hadalladii Mareykanka iyo Taalibaan?
‘Only yourselves to blame’: UK’s shortages seen from...
Sawirro: Muxuu Rooble kala hadlay taliyeyaasha ciidamada ee...
Kuuriyada Waqooyi oo ku eedaysay Maraykanka bilowga tartanka...
Britain forms AUKUS defence pact with Australia and...
Jubaland oo shaki ka muujisay go’aankii Farmaajo ku...
Daawo: Sarkaal soo jeediyey arrin la xiriirta xaasaska...